क्रांतिको बाटो र धैर्य र सम्वादको बाटो
रङभेद विरुद्ध काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन : हेर्नुस् ८१ तस्वीर
एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा उपेन्द्रजी पुग्नुभयो : राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, सहअध्यक्ष, समाजवादी पार्टी हामीले नेकपा र सरकारसँग वार्ता गर्ने, यदि नेकपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिबद्ध छ भने एउटा कार्यदल गठनका लागि प्रस्ताव गर्ने र प्रतिवद्ध छैन भने तुरून्तै सरकार छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । ..... अब कानून मन्त्रालय हाम्रो हातमा आएको छ, त्यसैले संविधान संशोधनको प्रस्थान विन्दू कानून मन्त्रालयबाटै हुने हो । हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश आन्दोलनका बेला उठाउनुभएको एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ । ..... हाम्रो नीति र सिद्धान्त मिलिसकेपछि सरकारमा बस्ने वा नबस्ने कुरा बाधक बन्दैन । सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने कार्यनीतिको विषय हो, नीति वा सिद्धान्तको विषय होइन ।
कांग्रेसको भरोसाको केन्द्र मधेश नै हो : रामकृष्ण यादव, नेता, नेपाली कांग्रेस जब–जब मधेशमा कांग्रेसको पक्षमा राम्रो परिणाम आएको छ, तब–तब कांग्रेसको सरकार बनेको छ । ..... २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रामनारायण मिश्रजी उद्योगमन्त्री हुँदा उहाँले नै जनकपुरधाममा चुरोट कारखाना स्थापना गराउनुभएको थियो । .... सामान्य गुटउपगुट पनि पहिलादेखि नै थियो, तर यसले अहिले विकराल रूप लिँदै गइरहेको छ ।
ढिलोचाडो प्रक्रिया पुर्याएर संविधान संशोधन हुन्छ : विमल प्रसाद श्रीवास्तव, प्रतिनिधिसभा सदस्य, समाजवादी पार्टी स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै राम्रो र ठूलो तथा कानुन मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै नराम्रो र सानो भन्ने होइन । ....... संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । हामी सरकारमा सहभागी नहुँदा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । त्यसैले संविधान संशोधन गराउनका लागि भए पनि पनि सरकारमा सहभागी भएका हौं । यदि दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन भने त सरकारमा बसिरहनुको कुनै ओचित्य रहँदैन । ढिलो चाँडो प्रक्रिया पु¥याएर संविधान संशोधन हुन्छ भने केही समय प्रतिक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारमा सहभागी हुनुको मूल उद्देश्य नै संविधान संशोधन हो । ...... आजको भोलि संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने छैन तर त्यसका केही आफ्नै निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन् । हतार गरेर मात्र हुँदैन । ..... राजपा पार्टीभित्र अध्यक्ष नै ६ जना हुनुहुन्छ । उहाँहरू बीचमा नै एकीकरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ । तैपनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय हो । उहाँहरूबाट पनि समान एजेण्डा भएका पार्टीहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनसाय आइरहेको छ । हामीले बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गरेका छौं । अब सबैको सहमतिको आधारमा पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । यो विषय पनि चाँडै टुगिंन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मधेशप्रति चिनियाँ नीति (सम्पादकीय) नेपालको भौतिक तथा जनशक्तिको विकासमा विशेष चासोका साथ सक्रिय रहेको चीनले मधेश एवं मधेशीसँग रंगभेदको राजनीति गर्दै आएको छ । नेपालको विकासमा भएका लगानीहरूमा चीनले हिमाल, पहाड वा खससमुदायमा मात्र केन्द्रित गरेर साम्प्रदायिकता भड्काउने कार्य गरिरहेको छ । ...... चीनको रोजाई हिमाल एवम् पहाड मात्र रहेको पाइन्छ ।
सुदृढ समाजवाद नै लोकतन्त्रको आधार (विचार), उपेन्द्र यादव अहिले पनि मुस्लिमहरूको मदरसा दर्ता हुँदैन । ...... अहिले अवसर प्राप्त भएको ब्युरोक्रेसीदेखि अन्य क्षेत्रहरूमा हेर्ने हो भने नेपालको दुई तिहाई जनसंख्या भएको समुदायले ३/४% प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व पाउँछ । ....... एउटा उच्च समुदायको दलितको र एउटा पछाडि पारिएको समुदायका दलितबीचको स्तर कहाँ मिल्छ र ? नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको घरमा जाँदा त्यो घरमा बुहारीको स्थान धेरै तल हुन्छ त्यहाँ समानता हुँदैन । ..... सुद्रहरूले भोगेको दुर्दशा र उत्पीडनहरू चरम सीमामा छ । त्यो पश्चिमी दुनियाँले अनुभूति नै गर्न पाएनन् । पूर्वीय दुनियाँ र पश्चिमी दुनियाँमा धेरै फरकपना छन् । ...... सबभन्दा प्रताडीत दलित, महिला लगायतका छन् । ........ जातीय आधारमा, वर्गीय आधारमा हुने शोषणा, उत्पीडन र लैगिंक असमानता र विभेदलाई अन्त्य गरी त्यस सँगसँगै सबैलाई बराबरी अधिकार भएको समान अवसर प्राप्त भएको लोकतन्त्र नै समावेशी लोकतन्त्र हो । .........संघीयता संविधानमा त लेखियो तर संघीयताको गुणहरूलाई संविधानले समेट्न सकेन । पञ्चायत कालमा निर्दलीय प्रजातन्त्र भने झै अहिले संघीयता भन्ने तर त्यसमा पहिचान, प्रादेशिक स्वायत्तता, समानतालाई हटाइदिने ? ....... सामाजिक लोकतन्त्र बिना राजनीतिक लोकतन्त्रको कुनै अर्थ छैन । लोकतन्त्रको सामाजिक स्वरूप र लोकतन्त्रको आर्थिक न्यायसँग जोडिनुपर्छ । ...... हामी कहाँ सांस्कृतिक विविधता छ तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल संसारको गरिब मुलुक मध्येको एक हो किन ? दुई तिहाईभन्दा बढी जनसंख्या भएको समुदायलाई राज्यद्धारा शदिऔंदेखि बहिष्करण र उत्पीडनमा पारिएको कारणले नै नेपाल पछाडि परेको हो । ........ यस्तो विभेद र असमानता रहिरहने हो भने हामी गरिब देश सुचीबाट माथि उठ्न सक्दैनौं । जातको आधारमा हुने विभेदलाई अन्त्य नगरिकन समाज अगाडि बढ्दैन ।
‘काँग्रेस र नेकपा नै जनताका वैकल्पिक शक्ति, तेस्रो शक्ति आउने अवस्था देखिएन’ जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्न कालापानी मुद्दा उचालिदैछ : राजपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँगको अन्तरवार्ता
कार्यविभाजनपछि प्रचण्डको योजना : भटाभट बैठक, फटाफट निर्णय ! प्रचण्डले यसरी ल्याउँदैछन् ६ महिने कार्यक्रम
उप चुनाव को नतिजाले नेकपा लाई नेका ले विस्थापित गरिहाल्ने छाँटकाँट देखाएन। यो कार्यकाल सकिए पछि फेरि नेकपा ले नै सरकार बनाउने संभावना देखिन्छ। बरु नेकपा भित्र ओली युग समाप्त भएर प्रचण्ड युग शुरू हुने भएछ भने मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हुन्छ पो कि भन्ने आशा को राजनीति मध्य धार मा छ। त्यस सोंचले निराशा माथि निराशा थप्ने संभावना रहन्छ।
Anti-Incumbency तर चोटिलो हुन्छ। नेकपा लाई दुई तिहाइ ल्याउन धेरै गारहो छ।
मधेस आंदोलन अहिले बड़ो गारहो अवस्था बाट गुज्रिरहेको अवस्था छ।
(१) अगाडि बढ्ने सबैभन्दा राम्रो बाटो एकीकरण को बाटो हो। तर त्यसको अत्तोपत्तो छैन।
(२) ओली ले संविधान संसोधन गरि पो हाल्छ कि भन्ने आशा डिनायल (denial) को राज्नीति हो।
(३) ओली ले होइन प्रचण्ड ले पो गर्छ कि भन्ने सोंच पनि त्यस्तै हो।
(४) मधेस कै भरमा देश चलाउँदा त जुन काँग्रेस ले गरेन त्यसले अब गर्ला भन्ने संभावना छैन। काँग्रेस विस्तारै विस्तारै राप्रपा हो।
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन